Ormus, alchemical monoatomic goridhe yekumutsa uye kubatana zvakare nedzimwe nyika - Afrikhepri Fondation
Ormus, alchemical monoatomic goridhe yekumutsa nekubatanidzazve kune dzimwe nyika
Verenga: 45 min
elms zvinonyatsotsanangurwa se "zvinhu zvinoshamisa". Hupenyu hwavo, kunyangwe husina kusimbiswa nenzvimbo yesainzi, hwaipupurira kuchina chimiro chechinhu nekutsanangurwa chisina kusimba, kana kunyorova kana gaseous. Nyika iyi yainzi "M-state".
Ormes inotorwa nesimbi. Hazvisi pasi pezvinhu zveMendeleev mifananidzo muupfu hwakapfurikidza.
Munguva yemakore 1970, munda wekutsvakurudza pane ORMUS wakatsigirwa zvakasimba pakuvamba kwayo David Hudson, murimi akapfuma wekuAmerica. Kubva parakaparara, kutsvagisa mumunda kwakashanda zvakanyanya padanho rekuvandudza, pamwe nekuvandudza uye zvakawanikwa zvinobva mukuyedzwa, kuyedzwa, uye nekuedza kwakanyanya kwevaongorori pasi rese. Mapoka mazhinji ekukurukurirana uye mashopu akatsaurirwa kuna Ormus anoshanda pamwechete de facto kusimudzira kunaka kweiyi mhinduro. Ivo varipo pamakondinendi mashanu.
Ormes chaizvoizvo zvinoreva "Kurongedzerwa Kwakarongwazve Monoatomic Elements". Izwi rokuti "Ormuz"Kana ari iye, ndiro zita rechimiro rinoshandiswa chero ripi zvaro kugadzirira rine zvinhu izvi. Mamwe maOrmus mazvigadzirwa anoitwa kubva kugoridhe, saka unowana goridhe muM-state. Zvimwe zvakagadzirwa kubva mumhangura, saka mhangura inowanikwa muM-state.
Imwe nzira yekubvisa, iyo inoramba iri yakanyanya kuitwa, ndiyo inonzi "nzira"nyorova", Uko ORMUS inogadzirirwa kubva mumuchuru wakasvibiswa sezvo inowanzove yakawanda yemaminerari. Mugumisiro wekugadzirira uku kunononoka kunonzi "transmutation"Maminiti aripo mumunyu kune maitiro avo muhurumende-M.
The ORMS kupa maonero matsva panyaya utano, kurima uye zvakatipoteredza, ane mamwe nezvaanogona zvikuru mamwe-munhuwo kufambidzana nomumwe, zvinhu izvi kuti reconnus- -if chokwadi vaiona inokosha uye zvichida iyo inofadza zvikuru inowanikwa mumunda wesayenzi yepanyama uye yezvakaberekwa.
Tisati tasvika pamwoyo wenyaya yeORMUS uye kuongorora mumugodhi wemafaira akashandurwa nemutsa saiti yedu, tinobvuma zviri nyore kuti kuvapo kwechinhu chinoita senge chiri pasi pechinhu chepamusoro-soro kunogona kuita sekunyadzisa vanopfuura mumwe wevaverengi vedu. Kunyanya kubvira payakawanikwa, anopfuura makore makumi matatu apfuura, yaiperekedzwa nekunyarara kunoshamisa chete.
Saka tinokumbira mubvunzo. Takagadzirira here? Asi zvakare, tiri vakasununguka kusangana necho chinhu ichi here? Kusununguka kubva muhuwandu hwemari uye yezvokutengeserana, kana kusununguka musununguko wedu wekusarudza, kusarudza, kutora danho rega pazvinenge zvichidiwa. Aya mibvunzo yatinofunga kuti yakakodzera kufungisisa.
Tichidzokera edu zvinogadzirisa, zvingava zvakanaka kutaura pano nzira yemaitiro kuti imwe shamwari dzedu, mumwe mutsvakurudzi panyaya Ormus kwemakore anopfuura 10 kwemakore, anoda kushandisa; "Haisi nguva yako yekuuya kuOrmes, ndiyo Ormes ichauya kwauri!"
Chii chinovanza kushandiswa kwekutsvaga kwemutauro wemafungiro uye kunyanya rima. Zvichida iwe uchazviona. Avo vagara vazive nebasa rekupedzisira Wilhelm Reich pa "orgone"Hazvizoshamisi nezvichazotevera. Zvechokwadi, nzvimbo yakawanda yehutano inoratidzika kunge inosvika munharaunda yedu. Zvinongoramba zviripo kuti ayambuke, uye kuti zvakaoma sei mumamiriro ezvinhu anoitika kuita shanduko yakadaro.
Les Ormes kupa mabasa avo zvedu pachedu tibatsirwe, kuti avo zvakatipoteredza, kuti nharaunda yedu nevanhu asi mhuka, chirimwa. Havazivi nharo, vari kuedza, zvinodiwa zvacho, dzimwe nguva suprenante nzira zvavakatemerwa kuranga sezvo tsamwisa asi néamoins vakaziva uye kuremekedzwa sezvo nhasi quantum wefizikisi.
Kushandiswa uye ruzivo rwe ORMES zvinhu zvinobuda nenzira yakarurama muzvikamu zvakawanda zvekare, zvichijekesa nechiedza chitsva pane dzimwe nguva dzinoshamisa, uye kupfura zvimwe zvezvinyorwa zvinyorwa zvinongozivikanwa kune avo vanotanga kusvika panguva iyoyo.
Nhoroondo dzezvakaitika kare dzakawanda. MuMesopotamiya yekare, Shem-an-na kana "dombo romoto" rakabudiswa kubva kugoridhe uye platinum. MuIjipiti yekare kwaakatumidzwa zita rake mfkzt (pfupa jena jena), ndivo vaive vakagadzirira vaharahara. Imwe yemagwaro akawanda anotaura pamusoro payo iri paguva re pyramidal raMambo Unas muSaqqara. Kubvira kuBhabhironi kuenda kuThebes uye gare gare kuAtene, shoko chete ndiro rinoshanduka, Ormus nhasi, Manna, Ka, Philosopher's Stone, zuro. Tsanangudzo yezvinhu zvezvinhu izvi zvisiri izvo zvinoramba zvisingaperi makore.
Nyaya inotanga muFoenix (Arizona) mu1976. Vamwe David Hudson, mupfumi akapfuma wekotoni nemakumi ezviuru zvemahekita enyika ndiye mutambi mukuru wekuvandudzwa uku.
MuArizona, ivhu rinonyanya kupfuma muSadium uye rinofanira kutarisirwa ne concentrated sulfuric acid. Nokudaro, kusanganiswa nemvura uye asidi zvishoma nezvishoma zvinokonzera kubata kwechikafu uye nekuwedzera calcium carbonate kune yakawanikwa ivhu rakafanira kukura mumakore mashomanana. Pasina kupinda muhutano hwemagetsi, akazviisa pasi pemishonga yakadaro, nyika yakaoma yakatanga kubudisa kupenya kwakachena kwazvo, mushure memvura yakaoma, gare gare iyi " goridhe chena "Yakapararira zvachose, saka yakananga kudzoka mushure mekunge dutu ...
Iyo ivhu rinobhururuka remunharaunda iyi richizivikanwa kuva nemadzinza asingawanzo uye ane zvigadzirwa zvinokosha, Hudson anoita zuva rakanaka kuti arongedze kuverenga kwakakwana kwehuwandu. Zvinoshamisa, vashandi vebazi vanoona kuti zvimwe zvematongerwo enyika zvinopesana chero kuongororwa: hapana simboti yesimbi, hapana chemakemikari anoita uye hapana chiratidzo chinotaridzika chinowanikwa! Mumwe wevatsvakurudzi anobva ataura kuti awedzere kutarisa kworuzhinji. Ndizvo chete izvo zvinotaridzika zvinotanga kuonekwa, uye kuvapo kwesimbi inokosha kunoratidzwa, kune wose anoshamisika.
Izvi zvinogadziriswa zvakaratidzwa: musanganiswa wesimbi, silica uye aluminium uye kunyanya 98% yezvigadzirwa zvepamusoro zveboka re platinum (ruthenium, Rhodium, Iridium et Osmium) iyo yakabva yatorwa nokuda kwe " rien ".
Mumakore ekutanga e90 makore, masayendisiti akauya kune zvinotevera: The ORMEs ane zvigaro zve superconductivity (kunyange chiedza chinogona kuparadzirwa nevari) uye maererano nekushisa kwavanoiswa pasi vanoita sevari levitate. Zvinhu izvi zvishoma zvinopukunyuka masimba emasimba uye inofamba magnetically. Izvo zvizvarwa zvepamusoro zvinoshandiswa, pa high spin ", Ne zero magnetic field, uyewo kunamatira kuchamhembe uye kumaodzanyemba magnetic mapurisa.
Dzidziso yeHal Phutoff Sur « zero point energy Uye nguva-nguva inowanikwa sangano rinowedzera rekuedza nekuda kweA ORMUS kunyange kuvimbiswa. Chinhu chiri pasi apa ndechekuti zvinhu zvinogona kuva zvisingaonekwi, kupukunyuka maonero edu anowanikwa kwepakati uye kuchinja chiyero ichi chenguva-nguva.
Somuenzaniso: " Hudson anoti kana ORMUS iridium ichipiswa ku 850º Celsius, ichapera uye icharasikirwa nehutatu hwayo hwose. Apo kutonhora kunodonha zvakare, kunowedzera uye kunowedzera huwandu hwayo hutatu hwekare. Ipa Hudson patent ine mapeji ekuongorora anogadzirwa ne thermogravimetric apparatus zvinoratidza izvi.
« Mumunda weyero yemasikirini, masayendisiti achangobva kusimbisa kuti nyaya yacho inogona kunge iri munzvimbo mbiri panguva imwe chete. Isu iye zvino tava kuziva kuti, nokuda kwekupindika kwezvakawanda, zvikamu izvo mamiriyoni ezviedza-makore ari oga anogona kuva muukama pasina kubatana. »
Maererano naHudson, ma electrons akagadziridzwa zvakare aizogadzira mapoka maviri eCoper (munyori wenyanzvi yemafungiro epamusoro-soro), zvichida kuti awedzere kushandura pakupisa.
Izvo zvipenyu zvezvinhu izvi chikamu chekuwedzera kwehupenyu. Kubva maonero aya, zvinhu zvakakwana zvehupenyu zvinongotsanangurwa chete nehuwandu hwehutano; ndiko kuti, basa rinoratidzika risina basa (maererano nechechi yekare thermodynamics) yezvinyorwa zvezvinyorwa zvirimo zvinotungamirirwa nemafungiro akaenzana emagetsi seaya anotungamirira kushandiswa kwemarara. Uku kutarisa kwezvinhu zvakanakisisa kwebhaibheri kwakatangwa ne Dr. Mae-Wan Ho. Basa razvino rave rakazarura maonero anovimbisa mu quantum biology. Kunyange zvazvo chikamu chiduku cheDNA chinoshandiswa neprotein coding, iyo yakawanda (yakanyorwa seDNA yakasvibiswa) inoshanda zvisingabatsiri nemakemikari kuti izivise munda. quantum Pamuviri. Ukuwo rumwe rutivi, mabhuku akawanda pamusoro pehutano hwakanaka muhupenyu hupenyu hunosimbisa kufungidzira kwaHudson pamusoro pezvinoitwa neOIMUS paDNA; vamwe vanogona kugadzirisa zvipembenene zveimwe.
Yakave yakataurwa kakawanda kuti Ormus anogona kuverenga "nhoroondo yezvechiremba"Kubva pamushandisi wayo, vamwe vanotaura kushungurudzika, zvakaipa, munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuviri dzine chokuita nevanopesana sezvinonzi Ormus akapinda mune zvakaitika kare, achiongorora zvose, kuona kana kuchinja kuchiri kudiwa.
Kune mitsara yemarudzi akasiyana-siyana emigumisiro yakanaka kubva kuvarapi vanojekesa uye vanachiremba mune dzimwe nyika, zvisinei - zvisishamisi - maitiro akadaro kazhinji haagamuchirwi kuti abudiswe mumabhuku ezvoutano zvekare.
Rimwe zuva, munun'una wake, uyo anofarira alchemy, anoratidza kubatana ne " goridhe chena Yakatsanangurwa nevamwe masayendisiti, hupfu hunoporesa hunhu hunozivikanwa kuwedzera hupenyu. Akashamisika, Hudson anopa ORMUS-yakagadzirirwa kugadzirira kune imbwa ine kenza uye piroplasmosis. Mhuka yakadzorerwa uye vanhu vakazvipira vakazvipira kuzviedza, vachiwana mibairo yakanaka. Hudson anogovera mamwe masampuli kuna vanachiremba anovanyorera kuvarwere vanorwara zvakanyanya. Kurapa kunoshamisa kunoonekwa kucharatidza, nemifananidzo inotsigira, hurukuro dzakapihwa naHudson, uyo akatumirawo masampuli kumarabhoritari akati wandei, kusanganisira Merck & Co uye National Cancer Institute. Iyo yekupedzisira inozoishandisa kune tsika dzekenza maseru uye ingo pedzisa kuti haina kukuvadza.
Izvozvo zvakati, hazvifaniri kumira kumirira sayenzi kushandisa zvakanaka ikoku kuwanikwa. Kuwedzera kwevagari vemo hakugoneki uye panguva imwe chete, nzvimbo yevhu yakarohwa inogadzikana uye inowanzogadzirwa. Kana zvaive zvichibvira kuwedzera kabhizha kuburikidza nekugadzirira kusina mvura kubva mumvura yegungwa, dambudziko rekushaya raizopa nzira yekuwanda. Uye kunyange pasina kushandisa ORMUS sezvokudya zvakananga kuwedzera, hutano hwevanhu huchavandudzwa. Mukuwedzera, sezvo mvura yegungwa isingagoni kuva nepententamende, zvakaoma kuona vanhu vazhinji vari kuisa chigamba pamusika uyu uye vachiita kuti isasvike kune vatatu vekurima varimi.
Izvozvo zvakauya sei mbeu, mhuka nevanhu vakabuda kunze kwezvinhu izvi? Mafungiro avo akakwirira mumvura yegungwa anoratidza kuti nekufamba kwenguva vakambodzwa ne runoff. Izvi zvinogona kutsanangura kuwedzera kwekudzivirira kwezvinhu zvakawanda zvepasi. Mukuwedzera, kuderera kwezvirimwa kunobatsira kuwedzera kwekomboni monoxide uye nokudaro kupisa kwepasi. Izvi zvinogona kudziviswa nekurapa nzvimbo huru dzevhu paOORM, semuenzaniso nekudiridza kwemhepo, kunyanya pamasango. Mukuwedzera, kutora fossil fuels, kukura kwezvirimwa zvinokonzera biofuel zvinogona kuwedzerwa pane zviduku.
Yakaramba ichitaridzika kuti kuwedzera kunowedzerazve mugore rechipiri uye rinotevera pashure pekurapa. Izvi zvichida nekuda kwekuti ORMUS inowedzera ivhu revhu ne mycorrhizae, symbiotic fungi inofanirwa kukura kwezvirimwa, kukosha kweiyo kunofanira kuonekwa nokuti yakanyanya kutyisidzirwa nehuwandu hwemakemikari emakemikari nemishonga yemishonga.
Mugore rokutanga rekurapa, plamu inobereka michero kaviri inorema seyomuti wekutonga; uye shure kwemakore maviri, kuyerwa kwakawanda kuburikidza nevashanu!
Uyewo akakodzera kutaurwa ndeaya maarangi akaenzana nekantaloupe melon ...
Iyo inozivikanwawo kuti mbeu dzeAORM-dzakarapwa hadzisi chete dzinobereka, asi dzakakura mumapanga, dzinoda kuderedza mboji uye dzinoramba dzichirwisa zvipembenene. Mukuwedzera, michero inonaka inonaka!
Ini ini ndayedza ORMUS pane mbatata. Mumitsara mina yemarudzi maviri akasiyana, maviri akabatwa uye mamwe maviri akangogamuchira yakaenzana nemvura. Mhinduro: 14 kg yekutonga, 26 kg yemiti yakarapwa. Ndakatorawo karoti pane 450 gramu ...
Yakawanikwa kuti mishonga yakabatwa kwemakore anoverengeka yakakura kusvika kaviri nekukura kwevamwe uye yakabudiswa katanhatu kune warnnuts; semakango emiti, ivo vakuru semamandarins!
Nyaya yekuvandudzwa kwemaseru mumhuka dzinoyamwisa. Katsi yakarasikirwa muswe mutsaona aine mwedzi.
Pashure pokurapa naOrmus muzvokudya zvayo uye pamucheto wemuswe, pane regrowth ye6cm mushure memwedzi ye2 nehafu.
Bvudzi uye bvudzi pigmentation zvinoonekwawo neORMUS mhangura yakamedzwa mushure megore rimwe kana maviri.
ORMUS zvinhu zvakagadzirwa nesimbi zvakakosha, mune zvisikwa zvisiri zvemasimbi.
Munyaya iyi, ivo vakawanda kwazvo kupfuura ivo vari mumutambo wavo wesimbi.
ORMUS zvinhu zvinowedzera maminera anokosha kune chero mararamiro amarudzi ose.
Zvisikwa zvakawanda zvinopupurira kubudirira kwehupenyu hwavo hutano shure kwekutora kwaO ORMUS zvinhu muhuwandu hwavo.
Zvimwe zvinhu zvakare zvine zvishamiso zvinoshamisa. Dzimwe nguva dzinonyangarika, dzoka kana kutama masvingo akaoma. Zvinotaridzika sezvinhu zvakashandiswa kare kare nevarchemist. Vave vachibatanidzwamana"Bhaibheri,"zvokuratidza", Kuna Mambo Soromoni Goridhe uye"mfktz"VaIjipita, vakarondedzerwa naLaurence Gardner mubhuku rake" Zvinyorwa Zvakarasika zveAreka Tsvene ". Mamwe mavara ekare, echiHindu neChinese, anotarisa kune zvimwe zvakafanana nezvinhu zvakafanana.
Vatengi vakawanda vanoti ORMUS zvinhu zvinowedzera masimba epfungwa nemweya.
ORMUS zvinhu zvinobva mumhepo, mvura uye pasi.
Nhamba yavo yakawanda inoita kuti zvive nyore kubvisa uye kushambadzira kwavo kunoda nyore makemikari uye magetsi nenzira. ORMUS zvishandiso zvakajeka zvetsika zvemakemikari izvo zvakagamuchira imwe maatomu maitiro. Nokudaro, iyo inenge iine 4e mamiriro ezvinhu akadai, kunze kweiyo yakasimba, mvura, uye gasi yatinoziva. Pane hukama hunokosha, ona hukuru, pakati pe "itsva"Nyaya yenyaya, inozivikanwa kwemakumi ezviuru nevarchemist, uye chiitiko cheanorgone simba.
Isu tiri kuda kuita kuti hukama huve pakati pezvinhu uye zvinyorwa ...
Nezvemvura, tinoziva kuti ine ine zvakawanda zvinopfuura maatomu e-hydrogen uye oksijeni.
Rimwe gononi remvura katatu rakasvibiswa rinorema 8 mapaundi, asi imwe gorosi ye laboratory-yakagadzirirwa mvura kubva mumhepo yakachena uye hydrogen inorema 7 pounds. Apo patinodzidza kuti zvinhu zviri muhurumende m zvinosvibiswa mumhepo, uye kuti vane simba rekuviga mukati memamolekoro, zvinoita zvinoita kufungidzira kuti idzi zvikamu " Nouvelles "Haana kumbobvira yawanikwa nemasayendisiti emagariro asi iyo inonyanya kukosha yemvura.
Izvi zvinogona kutsanangurawo migumisiro yendangariro"Uye kugadzirirwa kwemvura.
Chirevo pamusoro peUAE (sarudza pamufananidzo kuti uwane nyaya):
Mumakore ose ekupedzisira uye kunyanya kubva mumazuva aAlbert Einstein, masayendisiti akatevera kutsvaka kweChena Girairi yefizikisi yezvino: "iyo nyanzvi yakabatana zvachose". Izvi zvakatungamirira kuzvinhu zvinoshamisa uye kubuda kwemutauro mutsva wose unosanganisira zvinhu zvinoshamisa, quarks uye unyanzvi hukuru hwepamusoro, pamwe nekuziva kwezvirongwa zvehupenyu, zvisingazivikanwi kusvikira ikozvino, kupfuura kwatinoita nzvimbo yedu -kuziva nguva.
Mumunda weyero yemasikirini, masayendisiti achangobva kusimbisa kuti nyaya yacho inogona kunge iri munzvimbo mbiri panguva imwe chete. Iye zvino tinoziva kuti nekuda kwe "yakatokura"Zviyero zvinyorwa izvo mamiriyoni echiedza-makore ari oga anogona kuonana pasina kubatana. Nguva-nguva inogona kushandiswa, teleportation inova chaiye, zvigadzirwa zvinoziviswa kuti zvinopukunyuka kukurira kwemafambiro emhepo, uye svesa chaiyo inotipa kunzwisisa kunonzwisisika kwemamiriro ezvinhu e hyperdimensional.
Apo, munaGenesisi weGirairi Madzimambo, ndakaswedera kune zvinhumba zvemonoatomic ndarama uye platinic zvishandiso, ndakaona kuti zvingadai zvisina nguva refu zvisati zvaitika zvezvinhu izvi zvakanaka zvakakurukurwa. maonero ekugadzirwa kwemafuta emagetsi anoremekedza zvakatipoteredza. Ndakaratidza kuti idzi dzaizotora fossil mafuta ekufambisa uye mamwe maitiro anobatsira. Panguva imwecheteyo, ndakataura nezvekushandisa kwavo mune ramangwana mukurapa, uye kunyanya mukurapa kenza. Kunyanya, ndakatsvaga maitiro e antigravitational aya aya akadai mashomanana maduku uye masimba avo makuru anokwanisa kushandura nguva-nzvimbo.
Chinhu chinoshamisa zvechokwadi pamusoro pechinhu chinoshamisa, chepamusoro-soro, chichena chegoridhe uye platinoid metal ndechekuti kuwanikwa kwavo hakusi itsva. VaMesopotamiya vekare vaimudana Shemu-ane-na uye vaIjipita vakaritaura mfkzt (Kushandurwa kweiyo hieroglyphs inodzinga mazwi mairi), asi vaArekizandriya vakanamata sechipo cheParadhiso, uyezve chemhemiste, saNicholas Flamel, vakaitumidza kuti Philosopher's Stone.
Pose nguva dzenhoroondo, "powder yakaonekwa"Zvitsvene zvaionekwa seine simba risingaenzaniswi rekutsvaga, kutenderera uye kuterevhizheni. Yakaudzwa kuti ibudise chiedza chakajeka uye miviri inouraya, ichi chiri chiyi yehupenyu hunoita hupenyu hurefu. Munyika yanhasi, Institute of Advanced Studies (Austin, Texas, USA) yakatsanangura ichi chinhu se "exotic material", Uye hukuru hwavo hukuru (imwe yezvakakosha zvahwo) yakataurwa neCent for Advanced Studies (University of Illinois, USA) se"iyo inonyanya kukosha pfuma yezvinhu zvose".
« Nyaya yacho inotaurira kuti Mosesi akatora mhuru yendarama, akaipisa nemoto ndokuiisa muupfu yaaidyisa vaIsraeri. »
Zvisinei, magwaro ekare anoratidza zvakajeka kuti hunhu hwehukuru hwekugadzirisa uye kusununguka kwekusununguka kwaizivikanwa, kana kusanzwisisike, munyika yakakura yechitendero yenzira, kutaurirana kwaMwari, uye simba rinoshamisa re eletrikus. Muzvinyorwa zvechiGiriki, kutsvaga kwezvinhu izvi kwaiva pakati penheyo yeGoogle Fleece, asi mumashoko eBhaibheri ndiyo yaiva nzvimbo yakasimbiswa yeAreka yesungano, chifukidzo chegoridhe chakadzorerwa naMosesi Sinai, iyo yakazochengeterwa mutemberi yeJerusarema.
Asi zvisinei izvi zvose, nhoroondo yekutanga yeiyo mfkzt powder ndiyo inonyanya kukosha. Inowanikwa mune imwe nzvimbo chaiyo mumagwaro emipiramidhi yeEgipita; zvinyorwa zvitsvene zvinoshongedza guva re pyramidal raMambo Unas weNyika yechisanu paSaqqara. Inotsanangura nzvimbo iyo mambo anoratidzika kuti anorarama nokusingaperi nevanamwari uye nzvimbo ino inonzi Field of Mfkzt, nzvimbo yakanyatsobatanidzwa inobatanidza nechepamusoro-soro kune imwe nyika inonzi Field of the Blessed.
Sezvo zvishamiso zvisingazivikanwi zvine chokuita negoridhe zvine chirevo chemaarchemical, uye sezvo monoatomic powder projection, kunyange yakaumbwa nesimbi dzakanaka, inorondedzerwa se "Pierre", Ngatimboongororai zvinyorwa zvezana remakore rechi17 nemumwe munyori wenhau Eirenaeus Philalèthe [: Hazvizivikanwi French spelling]. Uyu anozivikanwa muzivi wokuBrithani, anoyemurwa naIsaka Newton, Robert Boyle, Elias Ashmole nevamwe vakadaro, rakabudiswa mu1667 bhuku rakanzi Zvakavanzika Zvakazarurwa [Zvakavanzika Zvakazarurwa]. Muchirevo ichi, anotsvaga mararamiro eDhiabhorosi, akafanirwa kuendesa tsvina yakawanda mugoridhe. Kuisa zvinhu zvakarongeka, Philalethes anopedzisa kuti Dombo rakanga riri roga rakagadzirwa negoridhe uye kuti unyanzvi hwemudzidzi hwaive hwakakwana kupedzisa.
Dombo redu harisi chinhu kunze kwegoridhe yakanatswa kusvika kune yakakwirira kwazvo yekunatswa nekugadzirisa kwekunze ... Yedu yegoridhe, haisisiri tsvina, ndicho chinangwa chikuru cheMasikirwo.
Mune chimwe chibvumirano chinonzi Nhungamiro Pfupi kuCelestial Ruby [Summary Guide kuRuby DengaPhilalethes anoti: Inonzi Petro nokuti yakasikwa; inorwisana nechiito chemoto pamwe chete nedombo. Muchiitiko ichi, iyo ndarama, yakachena kupfuura yakachena, yakagadzikana uye isingasviki sebwe, asi muchimiro iyo ipfumbu yakaisvonaka. Dzimwe nguva nguva yapfuura, muzana remakore rechi15, chiAlgistist wechiFrench Nicolas Flamel akanyora muTestamente Yake yekupedzisira, yakanyorwa 22 November 1416, kuti apo simbi yakaisvonaka yakaderedzwa zvakakwana uye yakaomeswa ikava "yakanaka yegoridhe powder"Ndiro Dombo reMaporofita.
« Inonzi Petro nokuti yakasikwa; inorwisana nechiito chemoto pamwe chete nedombo. Muchiitiko ichi, iyo ndarama, yakachena kupfuura yakachena, inogadziriswa uye isingagadziriswi sebwe, asi muchimiro iyo ipfumbu yakaisvonaka. »
Nyaya iyi yakareba yakasiya vafundisi vatsveyamiswa, nokuti kuiswa kwegoridhe kumoto zviri pachena hazviiti mhuka yakachena, asi yakanyungudzwa negoridhe. Gare gare munyaya yacho, zvisinei, zvinotsanangurwa kuti iyi pfumbu yakanaka kwazvo inogona kuunganidzwa pamwe chete nezvinonhuwira ndokushandurwa kuva chingwa chechingwa chena, icho Bhaibheri rekare reSeptuagint rinodana "chingwa chokuvapo".
« Iko kuKarnak iyo, kune 1450 av. J.-C., Thutmes III akatanga hukama hwake hweVadzidzisi veMitambo metallurgist. Vakataura kuti Great White Brotherhood, zita rinonzi rinotora kubva pane zvavanoita maererano nehupenzi husingazivikanwi hwekupenya. »
, Chipfuva nendarama muvharo iri zvose zviri vakavhengana uye kuvhiringidzwa nyaya moto mugomo uye akasimbisa kukosha Areka yesungano surmounted pedyo kerubhi, ane mapapiro rakabva mheni zvinouraya. Maererano nechingwa chekuvapo, izvozvi chiedza cheAreka chakanziwo "kuvapo"(Sezviri pachena kuvapo kwaMwari), uye vaGiriki vakaitumidza electrikus.
MuBhabhironi rekare, iyo yakagadziriswa yakakwirira-yepin powder yakachena yainzi an-na iyo yaireva "moto"Uye apo yakaumbwa muchingwa chechingwa chakanga chiri shem-an-na, ichireva mabheti emoto akafuridzirwa. Maererano neBhaibheri, vaIsraeri vakataura nezvechingwa chikafu semana, iyo inonzwika yakafanana. MuAntiquities yake yevaJudha, muzana ramakore rokutanga, Flavius ​​Josephus anotsanangura kuti shoko rokuti manna raiva mubvunzo zvirokwazvo mubvunzo: "chii ichocho?", Uye bhuku raEksodho rinosimbisa izvi:"vakadana mana iyo nokuti vakanga vasingazivi kuti chii".
Izvi zvinowirirana zvakakwana nezviratidzo zve mfkzt muEgypt Book of the Dead (inonziwo's papyrus). Iri remakore rechi18 remipumburu yemupumburu kubva kuThebes, inowanikwa neBritish Museum mu1888, inonyatsoratidzwa uye inoyera kupfuura 23 mamita refu. Mune basa iri rekare remitambo, chingwa chekuvapo chinosanganiswa naharahara uyo anotsvaka "chiedza chekupedzisira"Uye, pamagumo ega imwe neimwe yerwendo rwake, anoramba achibvunza mubvunzo uyu:"Chii chiri ? "
Mamwe magwaro akafanana ndeyemunguva IIIme Millennium BC, uye zviri reliefs dzakajeka Mount Sinai Serabit kuti madzimambo muIjipita akanga ingesting chena mana endarama mijenya pamusoro gore 2180 pamberi J.- C. Zvisinei, ndivo chete vanoziva chakavanzika chacho gadzira vaiva vateveri chakavanzika zvikoro (Master Vavezi) uye ramangwana mupristi Memphis akanga musoro Grand neemhizha.
" Kujekesa kwekupedzisira"(Kana, sezvazvakanyorwa nevaGiriki: gnosis), yaiva chido chakanaka chekusingaperi. Nokuti kunze kwemuviri wenyama, taifanira kuva ne "body of light"Ndizvo, zvakare, aifanira kutarisirwa nekuchengetwa kuitira kuti akure. The "body of light"Ainzi iyo ka uye kunyange zvazvo chaive chiri chimiro chisinganzwisisiki chehupenyu, akanzi agare akashingaira mune hupenyu hupenyu. Zvokudya zvekanga zvaiva chiedza, izvo zvakaunza chiedza uye chiedza chekubudisa chiedza chaiva mfkzt, chichena chegoridhe chegoridhe.
Kuchengetedza ruzivo urwu mupfungwa nekuyeuka kuti zvese zvezvinhu zvekuwana kwakadaro zvave nguva dzose dziri mitsva yekubvunzurudzwa kune vanyori vezvakaitika kare, vadzidzisi vezvidzidzo zvebhaibheri uye kunyange masayendisiti, isu iye zvino tichaenda pedyo nezvino.
Kusiya Middle East, nyaya yedu ichiri America apo, zvikuru netsaona, zvakavanzika izvi-refu kukanganwa zvesayenzi vakanga kumutsidzirwa ichangopfuura. Hazvisi chete kuti mfkzt yakasimudzwa kuti inotora nzvimbo yekutanga muongorori yakawanda yefisikiti, asi nhau dzeAreka yesungano, nhoroondo dzine chiedza, chiedza, uye dzimwe humwe unhu hwaMwari hwemavara ekare, kamwe kamwe vanova zvesayenzi zvemazuva ano.
Nyaya yekuwanikwa uku kwokutanga yakarondedzerwa 1996 muNeXUS nyaya nemurimi David Hudson wePoenix, Arizona. Akatsanangura kuti nyika yake yakanga ine zvigadzirwa zvakanyanya zve sodium zvakaomesa pamusoro uye zvakasvibisa mvura. Kuti agadzirise izvi, (mu1976), akaisa sulfuric acid muvhu kuitira kuti aparadze hutumburu uyu uye aite kuti isakanganisika. Asi nekuongorora zvikamu izvo zvakanga zvisati zvanyungudzwa neAic acid, akawana kuti chimwe chezvinhu zvacho chakanga chisina kujairika. Kunopisa neArizona zuva, chikamu ichi chakatsvaira mumoto wakazara wechiedza chena uye chakanyangarika zvachose. Zvisinei, muongororwo wezvinhu zvinoshamisa, izvi zvakasikwapurisa chinhu"!
Pashure kundikana Kuedza Cornell University, muenzaniso akatumirwa Harwell rabhoritari muna Oxfordshire muEngland, nokuti Nyuturoni activation pachisara asi kunyange kuti haana kubvumira mumwe musoro kuzivikanwa. Pakupedzisira, pamwe kubatsirwa Soviet Academy of Sciences, takasvika pakugumisa kuti zvinhu izvi rakajeka asinganzwisisiki chena yaiumbwa zvachose kuti Platinum nesimbi muchimiro wamboonekwa kuti sayenzi.
Sezvo kutsvakurudza uku kwakaramba kuchienderera mberi, mashoko acho aigara achipisa uye akadzivirirwa, zvichiita kuti kuchinja kwehuwandu hwehuwandu hwahwo huvepo. Yakanyatsoonekwawo pane imwe nzvimbo yekupisa, pearl chena yakasanganiswa kuva monoatomic powder (atomu imwe chete) uye panguva ino uremu hwayo hwakaderera zvikuru ku 56% yehutatu hwepakutanga. Kuwedzera kwekushisa kwa 1160 ° C kwakashandura ichi chinokosha mugirazi rinoshamisa, asi uremu hwahwo hunowana yekutanga 100%. Zvaiita sezvisingabviri, asi zvakaitika zvakadzokororwa kazhinji!
Kunyatsovhiringidzika, masayendisiti akaenderera mberi nekuongorora kwavo. Nokupisa uye kunotonhora kazhinji, pasi pegesi inert, vakaona kuti chikamu chinotonhorera chaitakura samukira kusvika kuhumwe hunoshamisa hunoenzana ne400 nguva yaro kukosha kwepakutanga; asi kuburikidza nokuipisa zvakare, kuyerwa kunopera kunze kwekuti hapana, chinhu chikuru chisina kunaka. Pavakabvisa simu kubva patirayi, vakaona kuti muenzaniso wacho wakanga wakaoma kukunda pane apo zvinhu zvacho zvaivepo uye kuti ichocho chaiva nechinzvimbo chekuendesa kusakosha kwayo kune chinhu chaiva nacho. Mune mamwe mazwi, kunyange nzvimbo yacho yakange ichitsvaga! Izvi zvakanyatsoenderana neAlexandria yekare yemagwaro ezvinyorwa izvo, makore 2000 apfuura, akataura pamusoro peDombo reParadhiso rinoti: "iyo inopfuura inorema kuwanda kwayo yakawanda yegoridhe, asi yakamboshandurwa ikava mupfu, haina kuita kuti uremu huenzanise ne feather".
Yakave yakasimbiswawo kuti chinhu chacho chaiva chechirongwa chepanyama chinokonzera zero magnetic field, uye chinoswededza kumaodzanyemba uye kumaodzanyemba magnetic matanda, paine simba rekutsvaga uye kuchengeta chero huwandu hwechiedza uye simba.
Panguva iyi, David Hudson akasangana naDkt Hal Puthoff, Mutungamiriri weIsi Institute of Advanced Studies muAustin, Texas. Mukutsvakurudza kwake kune zero-pfungwa simba uye kukura kwepasi sechishanduko chinokonzera zero-point simba, Puthoff akanga atsigira kuti kana nyaya inotanga kuitika mumatanho maviri (sezvakaita sampuli dzaHudson), yaifanira kufanirwa vanorasikirwa neAIDS 4 yeiyo inowedzera simba. Izvi zvinomiririra pamusoro pe44%, kunyanya chiyero chinokonzerwa nekuongororwa kwepoda yakachena.
Saka Hudson aikwanisa kuvimbisa, kuburikidza nemitambo, Puthoff pfungwa yokuti, apo monoatomic pfupfu inopfuurira kune imwe nyika yepamusoro-soro, inongopomera 56% yehuremu hwepakutanga; uyewo kuti kana inopisa inogona kusvika kune hutachiona huri pasi pezinga, kuitira kuti panguva ino bhodhi inorema kudarika iyo isina chinhu.
··· pakupedzisira kuburikidza kubatsirwa Soviet Academy of Sciences, takasvika pakugumisa kuti zvinhu izvi rakajeka asinganzwisisiki chena yaiumbwa zvachose pakati Platinum boka nesimbi muchimiro wamboonekwa kuti sayenzi ...
Nokupisa uye kunotonhora kazhinji, pasi pe gazinertes, vakaona kuti chikamu chinotonhorera chaitakura samukira kusvika kuhutano hunoshamisa hunoenzana ne400 nguva yakachengeteka yepakutanga; asi kuburikidza nokuipisa zvakare, kuyerwa kunopera kunze kwekuti hapana, chinhu chikuru chisina kunaka. Vakati waienda mharidzo tireyi, ilss'aperçurent kuti zvakanga zvairema kupfuura apo lematériau akanga aripo uye fuma vakatora pfuma kutamira weightlessness yaro chinhu kuti kaiva. ···
Sezvo simba rekuvhenekera rinotarisa nguva-nguva, Puthoff inogumisa kuti pfupa raiva "exotic material", Anokwanisa kukotamisa nzvimbo-nguva.
Zvisinei, pfzzt poda yakabva (zvichienderana nedzidziso yacho) inotarisa mune imwe nharaunda, pane imwe nguva iyo yaifanira kuva isina kuonekwa zvachose. Hudson zvakare akatsigira kuti iyi ndiyo chaiyo mamiriro acho: sampuli yakanyangarika mumaonero sezvo uremu hwahwo hwapera.
Zvatakanga tichitaura zvakanga zvisiri kungoona kushaikwa kwezvinhu, asi kuti zvakanyatsoendeswa kune imwe nzvimbo imwe ndege, chikamu chechishanu chenguva-nguva. Chiratidziro chakaitwa apo munhu akaedza kutama uye achiitora ne spatula, kuitira kuti kana yadzoka ichiona, nzvimbo yacho yakasiyana. Asi izvozvo hazvina kuitika, zvinhu zvose zvinowanikwa zvakananga munzvimbo imwechete uye zvakasikwa sepakutanga. Hapana chakanga chakavhiringidzika panguva yekusanzwisisika, nokuti kwakanga kusina chinhu chiripo pane zvakagadzirirwa. Muchidimbu, chinhu chacho chakanga chisingaoneki, chakanga chakashandura hupenyu hwacho uye chichienda kune rumwe rutivi.
Dr. Puthoff akatsanangura kuti yakanga yakafanana nekusiyana pakati pengorova yepamusoro, iyo isingagoni kuonekwa ne radar, uye ndege ingadai yakaenda pane imwe nharaunda zvachose.
Izvozvi, ipapo, ndiyo inyanzvi yepamusoro yeOrbit of Light kana, sezvazvakanyorwa pamakuva eEgipita, Du Champ de Mfkzt.
Pakutanga kwemakore e1990, nyaya dzekutengesa maatomu uye hukuru hwehutano hwakatanga kubudiswa nguva dzose mu nyanzvi yesayenzi. The Niels Bohr Institute paUniversity Copenhagen uye Argonne National Laboratories muna Chicago uye Oak Ridge National Laboratory, ari Tennissee, novimba US Department of Energy, akasimbisa kuti ose okunze yakawanikwa pedyo Hudson zvirokwazvo hwaivapo pakati iyo monoatomic state. Izvi zvaisanganisiraor uye boka re platinic simbi: theiridium, le rhodium, lepalladium, le Platinum, L 'osmium bv Le ruthenium.
Mukunyora mabhizimisi ayo, Hudson akaita kuti zvinhu zvienzaniswe seMonoatomic Orbital Rearrangement Elements (EMRO), uye izwi resayenzi rinotsanangura monoatomic phenomenon nderokuti: "high-spin deformed asymmetrically". Zvinhu izvi zvinonyanya kukosha nokuti maatomu akakwirira anokwanisa kutumira simba kubva kune rimwe kune rimwe asi pasina kurasikirwa.
Kushandiswa kwenguva-nguva kwakawana chido chakanaka, icho chakabudisa chiziviso chinoshamisa mumagazini yeClassical and Quantum Gravity muna May 1994. Munyori waro, nyanzvi yemasvomhu wokuMexico, Miguel Alcubierre, akati:
"Isu tinoziva kuti zvinobvira kushandura nguva-nzvimbo kuti zvibvumirwe kuti ndege inofambise kufamba nechepamusoro-soro yakakurumidza kungoitwa nekuwedzera kwemazuva-nguva mushure mechikepe uye nekupikisana kwakasiyana munzvimbo. kare; chikwata chinokurumidza kupfuura kukurumidza kwechiedza, evocative ye-warped propulsion yesayenzi yenhema".
Izvi zvakateverwa mwedzi mishomanana gare gare nenyaya muAmerican Scientist ("Hypersurfing pa Space-Time"Vol. 82, pgs. 422-3, October 1994). Muchidzidzo ichi, Michael Szpir akaratidza kuti pfungwa yaAlcubierre haina kupesana nedzidziso yeEinstein kuti hapana chinhu chinogona kufamba nekukurumidza kupfuura chiedza. Akatsanangura kuti paakanga ari muhondo yakaipa, chikepe chacho hachina kufamba zvachose. Kuwedzereka kwekodzero kwaizove kwakakura, asi kukurumidza chaiyo kwaizova zero.
Sezvo simba rekuvhenekera rinotarisa nguva-nguva, Puthoff inogumisa kuti pfupa raiva "exotic material", Anokwanisa kukotamisa nzvimbo-time.Hudson zvakare akatsigira kuti iyi ndiyo chaiyo: muenzaniso wacho wakanyangarika zvachose paona apo uremu hwahwo hwakabviswa.
Takanga tine nzira yekufambisa pahanho rechiedza raida nguva shoma chete uye mafuta mashoma ... asi chete kuti yakawanda yakawanda yenguva-nguva yakanga yakasununguka kubva mberi kwechombo kuti izviratidze kumashure, kuvonga, zvakananga, kupesana nekuwedzera.
Asi chii chaidiwa?
Pakupedzisira, British Britain News Scientific Editor, Dr. David Whitehouse, akati: Iyi pfungwa inobva pane pfungwa yokuti, kune vanoongorora fisi, nzvimbo haisi chinhu ... Space ine mamiriro ezvinhu anogona kukanganiswa nenyaya ... Chigadziko chaipo chaizongoramba chiri mubhokisi rakaputika pakati pezvinhu zviviri zvakavhiringidzika zvenzvimbo-nguva.
Chii ichi?exotic material"Iko Alcubierre airevei? Izvo zvine basa iro kushandiswa kwekunakidza kunopfuvura zero. Szpir akaritsanangura se "nhumbi dzakapiwa dzimba inonyanya kuzivikanwa yekusava nesimba kwesimba, kusiyana neshoko rinowanzoitika (iro vanhu, mapuraneti uye nyeredzi zvinoitwa), ane simba rakanaka. "
Izvo zvinodiwa zvekushandiswa kwechirongwa isimba guru rinogadzirisa; uye Hal Puthoff vakanga vatototsanangurira kuti, mune izvi, i mfkzt Phoenix yaiva chinhu chisina kusimba nechinzvimbo chekusiya nzvimbo-nguva.
Ngatidzokerei kutanga, tinogona kutora imwe kutarisa ORMS uye nekugadziriswa kwavo nguva dzose nevana vaIjipita uye madzimambo eBabiloni, kuti vaone kuti izvi zvinyorwa zvemonoatomic zvakashandiswa sei kusimbisa miviri yavo yechiedza, nemigumisiro inoshamisa.
Mune imwe nyaya iri muna May 1995 nyaya yeScientific American, migumisiro ye ruthenium metal, boka replatinum, yakakurukurwa maererano neDNA yevanhu. Izvo zvaionekwa kuti apo imwe yeruthinium atomu yakaiswa pamagumo ose evhapfupi yeDNA, ichi chakava 10000 nguva dzinowedzera kudzidzisa. Akange ari kuve mukuru wepamusoro. Kwemamwe nguva makemikari akanga afungidzira kuti kaviri helicoid inogona kusika, mumakwikwi ema molecule, nzira yakanyatsotungamirira, uye taive nechokusimbisa.
Saizvozvowo, Platinum Metals Review yakagara ichibudisa nyaya pamusoro pekushandiswa kwe platinum, iridium neRuthhenium mukurapa kwekenza (izvo zvinokonzerwa nokusadzorwa kusina kuchena kwemasero emuviri). Kana mamiriro DNA unogadzurudzirwa (ndiro zvazviri kenza), kushandisa imwe Platinum remubatanidzwa achaita anoshandawo pamwe akaremara muchitokisi, kukonzera kutandara DNA yayo rectification. Kubatwa kwakadaro hakurevi kuvhiyiwa chero kupi zvako; hairi kuparadza mavara akakomberedzwa nemirairo uye hairwise maitiro ezvirwere zvemuviri, sezvinoita radiotherapy uye chemotherapy.
Chiremba akazova nehanya nepamusoro-spin apo sangano rekutsvakurudza kwezvinyorwa zveBristol-Myers Squibb kambani yemishonga yakashuma kuti ruthenium kukanganisa DNA, kugadzirisa kukanganiswa kwemasero emukenza. (Ndarama uye platinum boka remonoatomic simbi zviripo "kushaya maatomu", Uye zvino yakasimbiswa kuti masero emumuviri anonangana nevamwe kuburikidza neatomu dzisina maturo kuburikidza nechiedza chekudzivirira). Zvinoshandiswa nesayenzi idzva ndeyekuti monoatomic ruthenium inoratidzika neDNA, inoparadzanisa pfupi helicoid uye inoigadzirisa zvakanaka; kungofanana nokuputsa uye kuvakazve chivakwa mune zvakashata.
Tinoziva izvozvoiridium bv Le rhodium zvose zvinopesana nekukwegura, asi ruthenium nemishonga yeplatinum inobatana neDNA mumutumbi wechipinda. Izvo zvinozivikanwawo kuti, mune yavo yakakwirira-spin monoatomic state, goridhe uye platinum inogona kushandura glandular endocrine system kusvika pakuunza kunzwisisa, maonero uye mano kune mamwe maitiro asinganzwisisiki. Munyaya iyi, inofungidzirwa kuti hupamhi-huta yehuta yegoridhe ine tsanangudzo yakajeka pane geni yepineal, ichiwedzera kubudiswa kwe melatonin. Saizvozvowo, monoatomic iridium powder ine zvakakonzera zvakafanana pakugadzirwa kwe serotonin yemucheka wepituitary, uye yaizoitazve "DNA kuraswa"Uyewo nzvimbo dzouropi dzisina kukwana kushandiswa, kana kwete zvachose.
Zvinonyanya kukosha kuti, zvisinei nezvose zvinodhura uye zvakadzama kutsvaga kutsvakurudza mundima iyi, zvakavanzika zvehukuru-bhururu zvinoputika zvakazivikanwa kumadzitateguru edu zviuru zvemakore apfuura. Vaiziva kuvapo kwe-superconductors yakakodzera mumuviri womunhu: zvikamu zvehutano hweumwe munhu wavakadana "muviri wekuedza" (the ka). Vaiziva kuti muviri uye chiedza muviri aifanira zvokudya kuwedzera kemikari kugadzirwa, uye pakupedzisira zvokudya yokupedzisira rakanzi Shemu-ane-na nevaBhabhironi, vaIjipiti mfkzt mana vaIsraeri.
The zvemashiripiti upfu fungidziro chakaitwa nevapristi Master Vavezi temberi (the Guardians reimba Gold) mu, zvakananga kuti deify madzimambo ... uye iye apiwa yakabuda idzva fuma chikuru munyika nhasi nzvimbo dzinobva kumuchirwere yekurapa kusvika kune ndege dzisina maturo. Anokwanisa kunyange kupa "exotic material"Zvinonyanya kukosha kufamba nzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo-nguva yakakura zvisingakwanisi kusvika ikozvino.
In Kurasika Secrets Areka Sacred, nhoroondo mfkzt monoatomic iri kuronda zvakadzama kubvira panguva yakare kusvikira nhasi, zvimwe anotaura kukosha Areka Bible Society. Zvakawanda zvakavanzika zvinoshandiswa kune chifukidzo ichi chinoshamisa, chiduku chavo chisati chiri chekusika kwaro paGomo reHorebhi.
Bhuku raEksodho rinotsanangura kuti apo Mosesi akaparadza mhuru yegoridhe yevaIsraeri, Mwari akapa mirairo yakanyatsorambidza kushandiswa kwezvifananidzo zvinomiririra zvisikwa zvipenyu zvose pasi pano kana kudenga. Asi pakarepo mushure mekunge, Mwari sezviri pachena akarayira muvezi Bezaleeri kuti agadzire Areka yesungano, achitaura (mukupesana kwakakwana kumutemo wakambomira) kuti makerubhi maviri endarama aifanira kukunda chifukidzo chavo. Dai vakanga vasiri ngirozi, sezvinowanzofungidzirwa, chii chaive ava makerubhi esoteric? Vakawana kupi simba rekubudisa izvi?chiedza chakajeka chokuvapo "ndiani akazonyadzisa mapurisa?
Maererano kunzwisisa edu iyezvino mukuru-kuruka okunze, zvinoita sokuti zvebhaibheri Areka (uye zvakafanana mano muIjipiti uye Bhabhironi) yakanga zvakananga kubatanidzwa zvesayenzi kweShanduro ibwe monatomic moto (the aShemu-ane-na ), pavanopa iyo zvinhu zvayo nzira dzekutungidzirwa, saka iko simba rekutsvaga uye simba guru reAreka.
Kubva panguva yaMosesi, munhu anogona kutora nyaya yeAreka kutemberi yeJerusarema. Ikoko, sezvazvakanyorwa muSeptuagint, Mambo Soromoni akashandisa simba rake "kuti vape zvokudya mumba mamambo weTire"Ndivanaani vakapa zvikepe, mabhiza nengoro kuRoyal House of Judah.
Zvichizo (uye zvisinei nemagwaro anopesana), Areka inogona kuteverwa kweimwe makore 2000 kusvikira basa rinoshamisa raiitwa munhoroondo ye Knights Templar muEurope. Wokupedzisira zvenhoroondo panotaurwa anouya kwatiri kubva muzana remakore rechigumi nemana, uye ichava nezve nzvimbo yake yokupedzisira kumboiswa kunzwisisa pamusoro superconducting ehupfumi kuti monoatomic zvinhu pamatunhu-kuruka pamberi kuitika nguva quantum wefizikisi uye tsvakurudzo .
Barry Carter weOregon, USA yakasarudza kupedza hupenyu hwake hwakatsaurirwa kune kuongorora Ormus zvinhu uye zvigumisiro. Anofamba nyika ichipa hurukuro uye zviratidzo pamusoro pechinyorwa ichi, chinowanikwa paairwaves eUnited States uye yakaunganidza zvose tsvakurudzo uye nhoroondo, raibhurari "Ormuz"PaIndaneti yake
Izvi zvinowanikwa kwose kwose muzvinhu zve 4 zvakaratidzwa kumadokero: mvura, mhepo, pasi, moto. The Ormus yakasimbiswa nesayenzi mumakore e1970.
IO Ormus iri pedyo neAlchemy nokuti ine zvinhu zvinoshamisa: nutritive minerals yehutano uye kurwisana nekenza, superconductivity, teleportation, kusingaoneki, kushanduka kwenguva-nguva.
Izvo zvinhu zve Ormus kuchiyeuka "White Gold"VanaAkemikari, Dombo reFioporopher kana Manna eBhaibheri ...
Chimwe chiverengero chemidziyo inokosha, iyo Rhodium, Iridium, Gold, Platinum, Palladium, Copper, inogona kusarudzwa muhurumende yakasimba, kunyange isina metallic, yakaita seguru guru. kana kuti-isina-machena nemamwe maitiro.
Izvo zvinhu zveOrmus zvaizivikanwa kune vekare. Tinowana matanho aro pakati peMesopotamiya, pakati pevaEgipita.
Iyo Ormus inowanikwa mune zvakasikwa asiwo inogona kuve yakagadzirwa nenzira dzakasiyana-siyana, Ormus iri muvhu mumhepo mumvura uye mumakore: mumadonomangwanani emvura, mumavortices, mu zvitubu zvemvura mhenyu, mvura inoputika, uye pamwe chete nematombo emagranite.
Ndiwo ubiquitous mushonga uye zvibereko zuva, nekuti kana chezuva kudziyisa ivhu nyoro pasi ipapo runopwa mari tsime izvo akasika chizvarwa Ormuz ndichifumira mumakore orgone.-
Mumabhuku mamwechete, verenga 'Ndarama yamangwanani' Armand Barbault.
The Indium rinoshandiswa anopfuura 80 makore ari Homeopathic mushonga (Indium metallicum) asi nhasi haisi kuzivikanwa fair ukoshi sezvo zvikasawanirwa Kufananidzira. Mune 70 makore Dr. Henry A. Schroeder, mukurumbira toxicologist uye purofesa chikamu Physiology wechikoro vezvokurapa pakati Dartmouth, vaidzidza pamusoro kupfuura 1000 vakazvipira vanhu pamusoro vasiri migumisiro indium .
Kutsvakurudza kunoratidza kuti Indium inoshanda kuburikidza ne-retro-control cycle mu hypothalamus / pituitary / adrenal (HPA) axis. mumasero izvi kutungamirira mashandiro anoita 40 kwemakemikari anobudiswa omumuviri uye kubatsira waidzora kugadzirwa 31 mahormone, kusanganisira kukura kwevanhu kemikari, Dhea, Melatonin, thyroid uye steroid mahormone.
Kuwedzera nokukurumidza kwesimba nesimba kune imwe yenhau dzinowanzotaurwa nezvevatambi. Saizvozvowo, zviratidzo zvekutanga zvekuvandudzwa muhutano huzhinji zvinotevera chete 5 kune mazuva 10 ekuwedzera. Imwe nguva yakareba-yakareba inokurukurwa, kusanganisira kuderera kukuru kwezviratidzo zvezera.
Indigo Spanish, Latin Indium: India. Indium yakawanikwa muna 1863 by Reich etRichter semugumisiro wekutsvaga kwekuratidzira kwemuenzaniso we blende uyo wakazaratidza kwavari miviri mihoro yegogo kusvika ikozvino isingazikamwi.
Inowanikwa mudiki zvishoma muChipupuriro cheNyika (0,05ppm), indium ndiyo inonzi 7eme mineral pakati pemaminerari anozivikanwa. Indium inowanzoitika mumuviri wedu, kukosha kwayo kunoderera kubva pa 25-35 makore, zvino kunopera zvese zvakakwana.
Ichokwadi, maererano neNational Institute of Environmental Health Sciences, iyo yakabudisa chidzidzo ichi:
"MATENDA ECHITENDA MUCHINHU CHINHU"Kubhuku 5: INDIUM. p.9 uye 537, yose indium Absorção de Água kubva zvokudya, pazuva pamunhu idukusa 8 micrograms (0,008mg) painenge wefodya nokuda muviri chete kusvika 0,2 ug, iyo inomirira mupiro unokosha.
Nzvimbo yeAlmumini yomuvakidzani, Nha. 49 mumutsetse we periodic wezvinhu, indium chinhu chinonakidza chezvikonzero zvakawanda. Kunyange zvazvo indium hausi kuzivikanwa fair ukoshi sezvo zvikasawanirwa Kufananidzira, zvakanga néamoins kushandiswa anopfuura 80 makore ari Homeopathic mushonga (Indium metallicum)
Nemhaka pedo kusavapo ayo ari cheni zvokudya, indium akanga refu vaitirei chiya inotonhorera, asi pakutsvakurudza uye kuchangobva mberi vaongorori vakawanda vakaratidza kuti zvisaririra chinhu indium akanga zvechokwadi waari pamwe kare.
Indium haigoni, mumamiriro ayo akaoma, inogadziriswa zvakanaka nemuviri wedu. Indium nokukurumidza inorasikirwa nebudency kana ichivhenganiswa nechingwa. Ndicho chikonzero, kunyange zvazvo indium yakave ichizivikanwa semuviri-hupfumi chinhu kubvira 1980, hakuna munhu akatoita indium chimwe chezvokudya zvinowedzera.
Kutsvakurudza neboka reasayendisiti kusanganisira dhi. Henri Shroeder akapfuura dambudziko iri nekuita indium, kwekutanga, bio-assimilable. Zvichida hauna kunzwa nezve dr. Shroeder, asi tisingazvizivi, tiri kunakidzwa nemigumisiro yebasa rake zuva rega rega kubva paiva iye uyo akaronga kubvisa mutungamiri kubva kune peteroli.
Zvokudya zvechisikiro uye kunyanya kwechikafu ndizvo zvinokonzerwa nekubudirira kwee indium inobvumira kuwana dzimwe nguva mitsva inonakidza zvishoma kana kuderera zvichienderana nemhosva.
Kuwedzera nokukurumidza kwesimba uye simba ndeimwe yenhau dzinowanzotaurwa nezvayo nevatambi kana vanofarira mafaro. Saizvozvowo, zviratidzo zvekutanga zvekuvandudzwa muhupenyu hune huzhinji zvinotevera chete 5 kune 10 mamwe mazuva ekuwedzera. Imwe nguva yakareba-yakareba inokurukurwa, kusanganisira kuderera kukuru kwezviratidzo zvezera.
Indium ndiye zvikasawanirwa Kufananidzira ane chiito haaiti kuti kwemakemikari anobudiswa uye hormone ezvinhu yose, nezuva kudya kuti indium wakati rakaratidzwa kuva zvinobatsira zera zvavo, kusanganisira ucharangarira, libido, kuyerwa mutemo uye shuga dzehutachiona. It kwakaratidzwa kuti supplementation uyewo anovandudza Absorção de Água vamwe zvakakosha zvisaririra zvinhu mumuviri - zvakadai mhangura zinc, manganese uye chromium - vakwanise kuita mabasa avo zvinobudirira. Mune miedzo yezvipfuwo, kuwandisa kwemitengo kwakabva kubva ku60 kusvika ku694% pavhareji zvichienderana nhengo dzaionekwa.
- Kuvandudza kurara mushure mezuva re15
- kunzwa kwehupenyu mushure me1 vhiki
- kukunda kwakanaka mumuviri pakupera kwemavhiki e2
- normalized ropa glucose mushure mavhiki 3-5
- libido yakadzokera kune yakajairika mushure mevhiki dze4
- kuderedzwa kweropa kushure kwevhiki dze10
- kumira kwemwedzi pashure pemwedzi 3
- yakasimba ocular kukanganisa mushure memwedzi ye4
Zvinosuruvarisa kuti nhamba kunotoda kurapwa zveBhaibheri zvinoitiswa zvinopfuura hunogutsa pamusoro Indium zvisaririra chaikosha paakasvika imwe nguva, kuti proportionality pakati dzavo kwazvo zvabuda uye kusavapo kuita ivo vagarisane mukati masayendisiti .
Zvimwe 1000 vanozvipira muvanhu vakadzidza na Dr. George BonadioUye rabhoritari zvidzidzo 1300 30 mashomanana apfuura kunoratidza kuti Indium normalizes mumasero zvikuru pituitary-hypothalamus-pineal, sezvo zvose kwemakemikari anobudiswa omumuviri uye mahormone anobudiswa kusanganisira yevanhu kukura mahormone, Dhea, Melatonin , steroid uye utachiona hwehomoni.
Indium inoratidzika kushanda kuburikidza nemhinduro yekudzoka mu hypothalamus / pituitary / adrenal (HPA) axis. Izvi zvinorondedzera mabasa ezvinyorwa zve40 endocrine uye dzinobatsira kugadziriswa kwemahomoni e31.
The hypothalamus ndiyo nhengo nechepakati tsinga, iri muuropi, ndiwo musimboti homeostasis uye parasympathetic mabasa akadai kufema, muviri tembiricha, zvokudya zvinodyiwa uye mvura uyewo mutange hwemimba yemimba.
Iyo pituitary inodzora kupararira kwekukura kwehomoni, zvipembenene zvepabonde nekushanda kwezvinyorwa zvezere.
Izvo zvinonzi adrenal glands zvinobereka sterols seAdrenaline, epinephrine uye cortisol. Aya mahomoni anotonga zvinokonzerwa nekuputika pamwe nekuona kwekutambudzika, kuneta uye kuchenjerera mupfungwa.
Kuchengetedza mhinduro yehutano hweHPA inogadzirisa basa nekugadzirwa kwemasvondo anonzi 31. Izvi zvinogadzirisa pfungwa yehupenyu hwevashandi vakawanda.
Imwe yedzidziso pamusoro pekukwegura ndeyokuti inosanganisira kuderedza kubudiswa kwemamwe mahomoni sezvatinokura. Indium inoita seinoita panguva ino nekuenzanisa nekugadzirisa hutano hweHPA, hypothalamus, pituitary uye adrenal glands. Aya mahomoni ari kushanda mukudzivirira kwehope, metabolism, kutonhora kwemuviri, chido, kukanganisa, chido chepabonde uye mamwe mabasa anokosha emuviri.
The Indium zvinosimudzira kemikari kurimwa nhanho kungofanana nevaya ouduku, izvozvo anoita zvakananga pamusoro mukuru mugadziri akabatana hormone kunokanganisa zvose zvinobatanidzwa vasachembera - Somuenzaniso, urongwa kukura mahormone kudzora metabolism uye kunokanganisa kuwanda kwemapfupa kunosimudzirwa. Indium inoshandawo zvakanaka pane utachiona uye inotsigira utachiona hwakakodzera, zvichiita kuti huwandu hwekoriori hutsve uye hubatsire mukusimudzira kuyerwa.
Zvimwe zvikomborero zvinoratidzwa nekushandiswa kwe indium sechinhu chinoita:
- Kuvandudza kutsungirira.
- Kuvandudza mhemberero
- Unhu hwehope (pineal melatonin)
- Rubatsiro rwemashure
- Kubatsira nehupenyu hwehuga hwehuga
- Kurongeka kweropa
- Yakagadziriswa chiitiko chemukenza wemapapu
- Inoderedza migumisiro yekuenda kumwedzi
- Inovandudza bvudzi kukura
- Inoderedza nguva uye simba rekutonhora kunotonhora
- Kuvandudza libido muvarume nevakadzi
- Kuvandudza zvirwere zve prostate
Dr. Schroeder akatsvakurudza anoratidza kuti indium inoderedza ngozi yezviremara zvinokwana 40%. Muchiitiko chemukenza wemapapu, indium ine yakanakisisa inorwisa-carcinogenic mukati mezvinhu zvose zvinonzi micronutrients, Aya anotaurawo nezvekuvandudzika kwekenza dzemukomana dzomukomana, kenza ye rectum, chiropa, pancreas .
Indium inowedzera neoplastic tissues uye inogumisa kupararira kwemasero anowanzova nekenza.
Mukana wekenza pamakamuri makuru, indium hairi kurapa asi inovandudza kunyaradzwa kwevarwere uye inoderedza marwadzo avo.
Kutsvakurudza kwakaratidza kuti indium inokonzera kuyerwa: vanhu vanorapwa vanorasikirwa nero.
Izvi zvinowanikwa pachena kune vakadzi kupfuura varume. Indium inobvumira varume nemadzimai kuchengetedza uremu hwakasimba kunze kwekusiyana kwezvinhu zvinowanzoita kuti utano huve pangozi. Indium inobatsira pane utachiona inokurudzira uye inogadzirisa kushanda, zvichibvumira muviri kupisa makoriyori akawanda uye kuisa mutoro waro. Indium inoita kuti munhu awedzere simba. Nokudaro, zvakanyanya kushingaira, vanhu vanopisa makoriyori akawanda, vanoita misuru pane mafuta.
Indium inoita kuti zvikwanise kubatsirwa nezvose zvinongororwa zvezvokudya zvedu uye zvinoita kuti tiwedzere hupenyu nehupamhi hwehutano. Haisi mubvunzo wekumisa kukwegura, asi yekuvandudza hutano hwehupenyu hwechipiri chikamu chehupenyu hwevanhu.
Nokubatsira kubvisa micronutrients iripo mumvura inopinda mumukati mukuru, indium inovandudza mararamiro ehupenyu hwemuviri, nokudaro inovandudza hutano huzhinji uye hupenyu hurefu.
Sezvakatsanangurwa kare, indium inoratidzika kuva nesimba rinotungamirira pane hypothalamus. Iyo pituitary inodzora kubudiswa kwehomoni dzakawanda 30 inoshandisa indium, utachiona hunobvuma kune chinhu chimwechete. Vatsvakurudzi vakacherechedza kuwedzerwa kwakanzwisisika muhutori hwemahomoni mushure mekuwedzera kuwedzera ne indium.
Indium inoderedza kuunganidzwa kwelactic acid nokuti inobvumira kubudiswa kwemashuga emasumbu.
Muvanhu vakwegura kupfuura makore e40, indium inopa kururamiswa kwehomoni inowira uye inowedzera kutsungirira (isina migumisiro) uye inobvumira kuchengetedza zviri nani pane chero basa remitambo.
Ormus Chakavanzika Alchemy YaMaria Magadharini Yakazarurwa - Chikamu [A]: Nhoroondo & Inoshanda ...
2 nyowani kubva ku € 29,65
1 yakashandiswa kubva ku25,37 €
Tenga € 29,65
Yakapedzisira kugadziridzwa munaFebruary 23, 2021 5:40 PM
Kutarisa munzira kuenda kuchikoro (2013)